Monday March 01, 2021 - 09:53:07 in Wararka by Super Admin
Ciidamda Xabashida Itoobiya ayaa markale xasuuq daran ka geystay gudaha gobolka Tigray ee dhaca waqooyiga wadankaasi.
Wararka ka imaanaya Itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaad kasoo jeeda qowmiyadda Amxaarada ay dil wadareed ugeysteen dad kasoo jeeda qowmiyadda laga tirada badanyahay ee Tigreega.
Muuqaal Video ah oo lagu baahiyay baraha Internetka ayaa muujinayay ciidamo Itoobiyaan Amxaara ah oo gacanta ku dhigaya sedax ruux Tigree ah kadibna nolosha ku tooganaya.
Video-gan oo si aad ah layskula dhax qaaday baraha Internetka ayaa muujinayay ciidamo ku labisan Dareeska melleteriga Itoobiya kuna hadlaya luqadda amxaarada, sedax qof rayid ah ayay goob fagaare ah ku jirdilayaan kadibna iyagoo caaytamaya ayay rasaas madaxa uga sharnaqayaan.
Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Mareykanka oo ka hadlay xasuuqan cusub ayaa sheegay in Addis Ababa ay wax ka weyndiin doonaan gumaadka ay geysanayaan ciidamadeeda.
Saraakiisha Jabhadda xireynta qowmiyadda Tigreega ee TPLF loo yaqaan ayaa sheegay in xasuuq aan kala joogsi laheyn uu gobolka ka socdo waxayna ku goodiyeen in ay sii wedayaan dagaalka ay kula jiraan ciidamada taliska Abiy Axmed.
Dagaalka udhaxeeya labada qowmiyadood ee isku haya talada wadanka Itoobiya ayaa umuuqda mid faraha kasii baxaya, dowladaha reergalbeedka ayaa ka digaya in haddii colaadda gobolka Tigray ay sii socoto uu dagaalka wadanka ka socda uu u xuub siiban doono dagaal sokeeyay oo aan dhammaad laheyn.
Halkan ka daawo qaabkii uu xasuuqu udhacay
Dagaal ka dhax qarxay Qowmiyadaha Amxaarada iyo Oromada Itoobiya.
Mareykanka oo xayiraado dhanka dhaqaalaha ah kusoo rogay Itoobiya.
Mas'uul Itoobiyaan ah oo iscasilay iyo Mareykanka oo sheegay in Xasuuq daran uu ka socdo Tigray.